Cold Chain/Cold Storage ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ Clauger နှင့် JRI တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ (...) - La France en Birmanie
ကြိုဆိုခြင်း > သတင်းများ > ပြင်သစ်သံရုံးမှ သတင်းများ > Cold Chain/Cold Storage ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ Clauger နှင့် JRI တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ (...)
Cold Chain/Cold Storage ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ Clauger နှင့် JRI တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိ
Cold Chain/Cold Storage ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ Clauger နှင့် JRI တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သော Mr. Aranzabal နှင့် Mr. Naticchioni တို့သည် ASEAN ဒေသတွင်းသို့ ဈေးကွက်လေ့လာရန်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး Hanoi နှင့် Ho Chi Minh ခရီးစဉ်အပြီးတွင် မတ်လ ၁၃၊၁၄ ရက်နေ့တို့၌ ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤခရီးစဉ်အတွင်း ၎င်းကိုယ်စားလှယ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ဈေးကွက်လေ့လာရေး လာရောက်ခြင်း အားဖြင့် ပြင်သစ်-မြန်မာကုန်သွယ်စီးပွားဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပြင်သစ်ကုန်သွယ်ရေးဌာန Business France, Tel: +95 (0)1 230 2168 (သို့) rangoun@businessfrance.fr ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Business France, the French trade commission of the Embassy of France, is happy to welcome Mr. Aranzabal, from the company CLAUGER, and Mr. Naticchioni, from the company JRI. Members of the « Cold Chain » delegation, they are visiting the ASEAN region this week.
Afterastop in Hanoi and Ho Chi Minh in Vietnam, they are in Yangon for two days (13th and 14th March), to meet potential local partners and thus strengthening Myanmanr and French trade relationship.